versets cles – Eglise EMIA de France
« Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy hialoha anareo, mba tsy hahalany taranaka anareo amin’ny tany, fa hamelona anareo amin’ny famonjena lehibe. » (Genesisy 45:7)
« Ny famonjenao no andrasako, Jehovah ô! » (Genesisy 49:18)
« Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy Izy; izao no Andriamanitro, ka hankalaza Azy aho, dia Andriamanitry ny razako, ka hanandratra Azy aho. » (Eksodosy 15:2)
« Nihanatavy Jesorona ka namely daka, Efa matavy ianao sady vory nofo no vaventibe, Dia nahafoy an’Andriamanitra Izay nanao azy izy, Ary nanamavo ny Vatolampy famonjena azy. » (Deotoronomia 32:15)
« Sambatra ianao, ry Isiraely; Iza no tahaka anao, ry olona voavonjin’i Jehovah, Ampingan’ny famonjena anao sy sabatry ny voninahitrao! Hikoy anao ny fahavalonao. Ary ianao handia ny fitoerany avo. » (Deotoronomia 33:29)
« [Fisaorana nataon’i Hana] Ary Hana nivavaka ka nanao hoe: Ny foko ravoravo amin’i Jehovah, Ny tandroko voasandratra amin’i Jehovah; ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko; fa mifaly amin’ny famonjenao aho. » (1 Samoela 2:1)
« Ary Samoela naka vato ka nanorina azy teo anelanelan’i Mizpa sy Sena, ary ny anarany nataony hoe Ebenezera*; fa hoy izy: Efa novonjen’i Jehovah isika hatramin’izao.[Ebnezera = Vato famonjena] » (1 Samoela 7:12)
« Ary hoy izy tamin’ny iraka izay tonga teo: Izao no holazainareo amin’ny mponina ao Jabesi-gileada: Rahampitso ilay efa mafampana iny dia hisy famonjena ho anareo. Dia tonga ny iraka ka nanambara izany tamin’ny mponina tao Jabesy; ka dia faly ireo. » (1 Samoela 11:9)
« Fa hoy Saoly: Tsy hisy olona hatao maty anio; fa androany no nanaovan’i Jehovah famonjena teo amin’ny Isiraely. » (1 Samoela 11:13)
« Fa hoy ny vahoaka tamin’i Saoly: Ho faty va Jonatana, izay nanao izao famonjena lehibe izao tamin’ny Isiraely? Sanatria izany! Raha velona koa Jehovah, tsy hisy na dia ny singam-bolony iray akory aza ho latsaka amin’ny tany, fa niara-niasa tamin’Andriamanitra izy androany. Ary ny vahoaka namonjy an’i Jonatana, ka dia tsy maty izy. » (1 Samoela 14:45)
« fa izy efa nanao ny ainy tsy ho zavatra ka namono ny Filistina, ary Jehovah nahavita famonjena lehibe ho an’ny Isiraely rehetra; ianao nahita izany ka faly; koa nahoana no dia hanota handatsaka rà marina ianao ka hahafaty foana an’i Davida? » (1 Samoela 19:5)
« Ary ny famonjena dia tonga fisaonana tamin’ny vahoaka rehetra androtrizay, satria ren’ny vahoaka tamin’izany andro izany hoe: Malahelo ny zanany ny mpanjaka. » (2 Samoela 19:3)
« Andriamanitra vatolampiko, Izy no ialofako, Ampingako sy tandroko famonjena Izy ary fiarovana avo ho ahy sy fandosirako; Ry Mpamonjy ahy, mahafaka ahy amin’ny fampahoriana Hianao. » (2 Samoela 22:3)
« Omenao ahy ny ampingan’ny famonjenao; Ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy. » (2 Samoela 22:36)
« Velona Jehovah; isaorana anie ny Vatolampiko; Asandratra anie Andriamanitry ny vatolampy famonjena ahy, » (2 Samoela 22:47)
« Ary tsy toy izany indrindra amin’Andriamanitra va ny taranako? Fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, Voalamina amin’ny zavatra rehetra sady voatandrina; Fa ny famonjena ahy rehetra sy ny iriko rehetra, moa tsy hampitsimohiny va? » (2 Samoela 23:5)
« dia nitsangana Eleazara ka namely ny Filistina mandra-pahavizan’ny tànany ka efa niraikitra tamin’ny sabatra; ary Jehovah nanao famonjena lehibe tamin’izany andro izany, ka ny haka babo ihany no sisa nanarahan’ny olona azy. » (2 Samoela 23:10)
« dia nijanona teo afovoan’io tany io kosa izy ka nahazo io ary namono ny Filistina; ka dia nanao famonjena lehibe Jehovah. » (2 Samoela 23:12)
« Ary hoy izy: Vohay ny varavarankely atsinanana. Ary dia novohany. Dia hoy Elisa: Alefao. Ka dia nalefany. Ary hoy izy: Zana-tsipìkan’ny famonjen’i Jehovah, dia zana-tsipìkan’ny famonjena hahavoa ny Syriana! fa hamely ny Syriana ao Afeka ianao mandra-pandringanao azy. » (2 Mpanjaka 13:17)
« Fa nijanona teo afovoan’io tany io kosa Eleazara ka nahazo io ary namono ny Filistina, ka dia nanao famonjena lehibe Jehovah. » (1 Tantara 11:14)
« Ary manaova hoe: Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, ary angòny izahay, ka vonjeo tsy ho azon’ny jentilisa, Mba hisaoranay ny anaranao masina, ka ho reharehanay ny fiderana Anao. » (1 Tantara 16:35)
« Koa ankehitriny mitsangàna, ry Jehovah Andriamanitra ô, ho amin’ny fitsaharanao, dia Hianao sy ny fiaran’ny herinao; aoka ny mpisoronao hitafy famonjena, Jehovah Andriamanitra ô. ary aoka ny olonao masina hifaly amin’ny soa. » (2 Tantara 6:41)
« Dia niangona ny Joda hangataka famonjena amin’i Jehovah; eny, avy tamin’ny tanànan’ny Joda rehetra hitady an’i Jehovah izy. » (2 Tantara 20:4)
« fa raha hangina mihitsy ianao amin’izao andro izao, dia hisy fahafahana sy famonjena hiseho avy amin’ny fitoerana hafa ho an’ny Jiosy, fa ianao sy ny mpianakavin-drainao kosa dia haringana; ary iza no mahalala, fa angamba ho amin’izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin’ny fanjakana? » (Estera 4:14)
« Lavitra ny famonjena ny zanany Ka torotoro eo am-bavahady, nefa tsy manan-kamonjy; » (Joba 5:4)
« Ary izao no ho famonjena ahy: Ny* mpihatsaravelatsihy** tsy sahy mankeo anatrehany.[*Na: Ary ho famonjena ahy Izy, fa ny][**Na: ratsy fanahy] » (Joba 13:16)
« Voatodika hamely ahy ny fampitahorana: Manenjika ny voninahitro tahaka ny rivotra izy, ka levona tahaka ny rahona ny famonjena ahy » (Joba 30:15)
« An’i Jehovah ny famonjena; Ho amin’ny olonao anie ny fitahianao*.[Na: Ho amin’ny olonao ny fitahianao] » (Salamo 3:8)
« Mba holazaiko avokoa ny fideràna Anao rehetra; eo am-bavahadin’i Ziona zanakavavy no hifaliako amin’ny famonjenao. » (Salamo 9:14)
« Noho ny fampahoriana ny ory sy ny fisentoan’ny malahelo, dia hitsangana Aho ankehitriny, hoy Jehovah; hovonjeko izay vingavingain’ny sasany*. [Na: Hataoko mahita ny famonjena iriny izy] » (Salamo 12:5)
« Fa raha izaho kosa, dia ny famindram-ponao no itokiako; ho faly amin’ny famonjenao ny foko. » (Salamo 13:5)
« [Ny faharatsian’ny olona, sy ny fanirian’ny sasany famonjena] Ho an’ny mpiventy hira. Nataon’i Davida. Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy; tsy misy manao ny tsara. » (Salamo 14:1)
« Enga anie ka hivoaka avy ao Ziona ny famonjena ny Isiraely! Raha ampodin’i Jehovah avy amin’ny fahababoana ny olony, dia ho faly Jakoba, ary ho ravoravo Isiraely. » (Salamo 14:7)
« Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy; Andriamanitro, vatolampy ialofako, sy ampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy. » (Salamo 18:2)
« Omenao ahy ny ampingan’ny famonjenao; ny tananao ankavanana no manohana ahy, ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy. » (Salamo 18:35)
« Velona Jehovah; isaorana anie ny Vatolampiko; asandratra anie Andriamanitry ny famonjena ahy, » (Salamo 18:46)
« Hahatonga famonjena ho anao avy amin’ny fitoerana masina anie Izy, ary hanohana anao avy any Ziona. » (Salamo 20:2)
« Aoka hihoby noho ny famonjena azonao izahay, ary amin’ny anaran’Andriamanitray no hanangananay faneva; ho tanterahin’i Jehovah anie ny angatahinao rehetra. » (Salamo 20:5)
« [Fisaorana atao rehefa miverina avy any an-tafika ny mpanjaka] Ho an’ny mpiventy hira. Salamo nataon’i Davida. Jehovah ô, ny herinao no hifalian’ny mpanjaka; ary endrey ny haben’ny hiravoravoany amin’ny famonjenao! » (Salamo 21:1)
« Lehibe ny voninahiny amin’ny famonjenao; Laza sy voninahitra no nataonao taminy. » (Salamo 21:5)
« [Fitarainana mafy noho ny fahoriana, ary fisaorana noho ny fahafahana, sy filazana ny handrosoan’ny fanjakan’Andriamanitra] Ho an’ny mpiventy hira. Alaieleth-hasahara. Salamo nataon’i Davida. Andriamanitra ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy ahy Hianao? Lavitra ny famonjena ahy ny tenin’ny fitarainako. » (Salamo 22:1)
« Handray fitahiana avy amin’i Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin’Andriamanitry ny famonjena azy. » (Salamo 24:5)
« Tariho amin’ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Hianao no andrasako mandritra ny andro. » (Salamo 25:5)
« [Fahatokiana an’i Jehovah, Mpiaro sy Mpitahy ny olony] Nataon’i Davida Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako? » (Salamo 27:1)
« Aza manafina ny tavanao amiko, aza mandroaka ny mpanomponao an-katezerana; efa famonjena ahy Hianao; aza manary na mahafoy ahy, ry Andriamanitry ny famonjena ahy. » (Salamo 27:9)
« Ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena, ary tsy mahavonjy ny haben’ny heriny. » (Salamo 33:17)
« Ny fanahintsika miandry an’i Jehovah; famonjena antsika sy ampingantsika Izy. » (Salamo 33:20)
« Ary raiso ny lefona, ka sakano izay manenjika ahy; lazao amin’ny fanahiko hoe: Famonjena anao Aho. » (Salamo 35:3)
« Fa ny famonjena ny marina dia avy amin’i Jehovah; Fiarovana mafy ho azy amin’ny andro fahoriana Izy. » (Salamo 37:39)
« [Fisaorana noho ny famonjena efa azo sy fanolorana ny tena hankatò ny tenin’Andriamanitra, ary fangatahana ho amin’ny andro sisa] Ho an’ny mpiventy hira. Salamo nataon’i Davida. Niandry dia niandry an’i Jehovah aho; ary nitodika nitsinjo ahy Izy ka nandre ny fitarainako. » (Salamo 40:1)
« Ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tato am-poko; ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako; tsy nanafina ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao tamin’ny fiangonana lehibe aho. » (Salamo 40:10)
« Aoka ho faly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady Anao; aoka izay rehetra tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe: hankalazaina anie Jehovah. » (Salamo 40:16)
« Nahoana no mitanondrika ianao, ry fanahiko? ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantenà an’Andriamanitra, fa mbola hidera Azy ihany aho, Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. » (Salamo 42:11)
« Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? manantenà an’Andriamanitra, fa mbola hidera Azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. » (Salamo 43:5)
« Hianao dia Hianao no Mpanjakako, Andriamanitra ô; Mandidia famonjena ho an’i Jakoba. » (Salamo 44:4)
« Izay manatitra fanati-pisaorana no manome voninahitra Ahy; ary izay mitandrina ny lalany no hanehoako ny famonjen’Andriamanitra. » (Salamo 50:23)
« Ampodio amiko ny fifaliana amin’ny famonjenao; ary tohàny fanahy mazoto aho. » (Salamo 51:12)
« Vonjeo ho afaka amin’ny valin-drà aho, Andriamanitra ô, Andriamanitry ny famonjena ahy; hihoby ny fahamarinanao ny vavako*.[Heb: ny lelako] » (Salamo 51:14)
« Enga anie ka hivoaka avy ao Ziona ny famonjena ny Isiraely! raha ampodin’Andriamanitra avy amin’ny fahababoana ny olony, dia ho faly Jakoba, ary ho ravoravo Isiraely. » (Salamo 53:6)
« Amin’izany faharatsiany izany moa hisy hahafahany va*? Aripaho amin’ny fahatezeranao ny firenena. Andriamanitra ô.[Na: Ny faharatsiana no atao-ny ho famonjena azy] » (Salamo 56:7)
« Vonjeo amin’ny mpandrafy izahay; fa zava-poana ny famonjena ataon’ny olona. » (Salamo 60:11)
« [Fiantombenan’ny fanahy izay manantena an’Andriamanitra, na dia mafy aza ny famelin’ny fahavalo] Ho an’ny mpiventy hira. Al-jedotona. Salamo nataon’i Davida. Andriamanitra tokoa no iantombenan’ny fanahiko; avy aminy ny famonjena ahy. » (Salamo 62:1)
« Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy ka tsy hangozohozo loatra aho. » (Salamo 62:2)
« Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy, ka tsy mba hangozohozo aho. » (Salamo 62:6)
« Andriamanitra no iankinan’ny famonjena ahy sy ny voninahitro; ny vatolampiko mafy sy ny aroko dia ao amin’Andriamanitra. » (Salamo 62:7)
« Zava-mahatahotra no ataonao amin’ny fahamarinana ho valin’ny vavakay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, ry tokin’ny faran’ny tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra eny. » (Salamo 65:5)
« Mba ho fantatra ety ambonin’ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin’ny jentilisa rehetra. » (Salamo 67:2)
« Isaorana anie ny Tompo Izay mitondra ny entan-tsika isan’andro isan’andro*, eny, Andriamanitra Izay famonjena antsika. [Na: Isaorana isan’andro isan’andro anie ny Tompo; Raha misy mahavesatra antsika, dia Andriamanitra no famonjena antsika; na: Isaorana anie ny Tompo, Izay mampitondra entana antsika isan’andro isan’andro] » (Salamo 68:19)
« Andriamanitra no Andriamanitry ny famonjena ho antsika; ary an’i Jehovah Tompo ny fanafahana amin’ny fahafatesana. » (Salamo 68:20)
« Fa izaho hivavaka aminao amin’ny andro fankasitrahana, Jehovah ô, dia aminao , Andriamanitra ô noho ny haben’ny famindram-ponao; valio aho araka ny hamarinan’ny famonjenao. » (Salamo 69:13)
« Fa izaho dia ory sy mahantra, Andriamanitra ô; aoka ny famonjenao no hanandratra ahy. » (Salamo 69:29)
« Aoka hifaly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady Anao; ary aoka izay tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe: hankalazaina anie Andriamanitra. » (Salamo 70:4)
« Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. » (Salamo 71:15)
« Fa Andriamanitra no Mpanjakako hatrizay hatrizay; manao famonjena eny amin’ny tany Izy. » (Salamo 74:12)
« Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, noho ny voninahitry ny anaranao; ary afaho izahay, ka mamelà ny helokay, noho ny anaranao. » (Salamo 79:9)
« Miverena aminay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, Ary ampitsaharo ny fahatezeranao aminay. » (Salamo 85:4)
« Asehoy anay ny famindram-ponao, Jehovah ô, Ka omeo anay ny famonjenao. » (Salamo 85:7)
« [Vavaka nataon’izay nasian’ny fahoriana mafy ka toa foin’Andriamanitra] Tonon-kira. Salamo nataon’ny Koraita. Ho an’ny mpiventy hira. Almahalath-leanoth. Maskila nataon’i Hemana Ezrahita. Jehovah ô, Andriamanitry ny famonjena ahy, Andro aman’alina no itarainako eo anatrehanao; » (Salamo 88:1)
« Tamin’izany ny olonao masina dia nilazanao tamin’ny fahitana hoe: Nametraka famonjena tamin’izay mahery Aho Ary nanandratra ny anankiray voafidy* tamin’ny olona.[Na: nanandratra zatovo avy] » (Salamo 89:19)
« Izy hiantso Ahy hoe: Raiko Hianao, Andriamanitro sy Vatolampin’ny famonjena ahy. » (Salamo 89:26)
« [Fiantsoana hivavaka amin’Andriamanitra sy hankatò ny teniny] Avia, aoka isika hihoby ho an’i Jehovah; Aoka isika hanao feo fifaliana ho an’ny Vatolampy famonjena antsika. » (Salamo 95:1)
« [Fifaliana amin’Andriamanitra noho ny nanehoany ny famonjeny sy ny fahamarinany] Fihirana. Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Fa efa nanao fahagagana Izy; Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. » (Salamo 98:1)
« Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin’ny taranak’i Isiraely Izy; Efa nahita ny famonjen’Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. » (Salamo 98:3)
« Jehovah ô, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao; Vangio amin’ny famonjenao aho, » (Salamo 106:4)
« Vonjeo amin’ny fahavalo izahay; Fa zava-poana ny famonjena ataon’ny olona. » (Salamo 108:12)
« Handray ny kapoaky ny famonjena aho Ka hiantso ny anaran’i Jehovah. » (Salamo 116:13)
« Jehovah no heriko sy fiderako. Fa efa famonjena ahy Izy. » (Salamo 118:14)
« Ao an-dain’ny marina ny feo mihoby noho ny famonjena; Ny tanana ankavanan’i Jehovah mampiseho hery; » (Salamo 118:15)
« Hidera Anao aho, fa efa namaly ahy Hianao Ka efa famonjena ahy. » (Salamo 118:21)
« [VAO] Aoka ho tonga amiko ny famindram-ponao, Jehovah ô, Dia ny famonjenao, araka ny teninao. » (Salamo 119:41)
« [KAFA] Ritra ny aiko, satria manina ny famonjenao aho; Ny teninao no andrasako. » (Salamo 119:81)
« Pahina ny masoko miandry ny famonjenao. Sy ny tenin’ny fahamarinanao. » (Salamo 119:123)
« Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena, Satria ny didinao tsy tadiaviny. » (Salamo 119:155)
« Miandry ny famonjenao aho, Jehovah ô, Ka mankatò ny didinao. » (Salamo 119:166)
« Efa manina ny famonjenao aho, Jehovah ô; Ary ny lalànao no firavoravoako. » (Salamo 119:174)
« [Fahatokian’izay manana an’i Jehovah ho Mpiaro azy] Fihirana fiakarana*. Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy**? [**Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga][**Na: Izay ihavian’ny famonjena ahy] » (Salamo 121:1)
« Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. » (Salamo 121:2)
« Ny famonjena antsika dia amin’ny anaran’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. » (Salamo 124:8)
« Ny mpisorona ao dia hampitafiko famonjena; Ary hihoby tokoa ny olo-masina ao. » (Salamo 132:16)
« Jehovah, Tompo ô, ry Herin’ny famonjena ahy, Manarona ny lohako amin’ny andro fiadiana Hianao. » (Salamo 140:7)
« Izay manome famonjena ho an’ireo mpanjaka, Sady mamonjy an’i Davida mpanompony tsy ho voan’ny sabatra mandratra. » (Salamo 144:10)
« Fa sitrak’i Jehovah ny olony; Ravahany famonjena ny mpandefitra. » (Salamo 149:4)
« Fa ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady, Ary raha maro ny mpanolo-tsaina, dia misy famonjena. » (Ohabolana 24:6)
« [Ny amin’ny famonjena hataon’Ilay Solofon’i Davida, sy ny hira fiderana hatao amin’izany] Ary hisy Solofo mitsimoka eo amin’ny fototr’i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin’ny fakany; » (Isaia 11:1)
« Indro, Andriamanitra no famonjena ahy; dia hatoky aho, fa tsy mba hatahotra; Fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy Izy. » (Isaia 12:2)
« Fa nanadino an’Andriamanitry ny famonjena anao ianao ary tsy nahatsiaro ny vatolampy fiarovana mafy ho anao, ka dia nanao voly mahafinaritra ianao ary zana-boaloboka avy amin’ny firenena hafa no nambolenao teo; » (Isaia 17:10)
« Ary amin’izany andro izany ny mponina ety amoron-dranomasina dia hanao hoe: He! ity manjo ilay nantenaintsika sady nandosirantsika ho famonjena antsika ho afaka amin’ny mpanjakan’i Asyria! Aiza intsony re no handosirantsika? » (Isaia 20:6)
« Amin’izany andro izany dia hohiraina eto amin’ny tanin’ny Joda izao fihirana izao: Manana tanàna mafy isika; Famonjena no hotendren’i Jehovah ho manda sy fiarovana. » (Isaia 26:1)
« Efa bevohoka izahay, efa nihetsi-jaza izahay, Efa tahaka ny nitera-drivotra izahay; Tsy nahavita famonjena ho an’ny tany izahay, ka tsy niteraka ny mponina amin’izao tontolo izao. » (Isaia 26:18)
« [Ny hampijaliana ny Isiraely noho ny niankinany tamin’i Egypta sy ny hiarovan’Andriamanitra izay mibebaka, ary ny hanendreny mpanjaka izay hitondra azy amin’ny fahamarinana] Lozan’izay midina any Egypta hitady famonjena sy miantehitra amin’ny soavaly ary matoky ny kalesy, satria maro ireny, sy ny mpitaingin-tsoavaly, satria mahery dia mahery ireny, fa tsy manandrandra ny Iray Masin’ny Isiraely, na mitady an’i Jehovah. » (Isaia 31:1)
« Jehovah ô, mamindrà fo aminay; Hianao no antenainay*; Aoka ho sandrinay isa-maraina ianao sy ho famonjena anay amin’ny andro fahoriana. [heb. sandriny] » (Isaia 33:2)
« Ary hisy andro tsy manam-piovana ho anao, eny, haren’ny famonjena sy ny fahendrena ary ny fahalalana; Ny fahatahorana an’i Jehovah no rakitrao*. [Heb. rakiny] » (Isaia 33:6)
« [Ny amin’ny Mpanompon’i Jehovah, mpitondra famonjena ho an’ny Isiraely sy ny firenena rehetra] Indro ny Mpanompoko, Izay tantanako, dia Ilay voafidiko sady sitraky ny foko Napetrako tao aminy ny Fanahiko; Hamoaka fitsipika ho an’ny jentilisa Izy. » (Isaia 42:1)
« Manateteva avy any ambony, ry lanitra, ary aoka ny habakabaka hampilatsaka fahamarinana; Aoka ny tany hisosatra, Ary aoka ho vokatra avy amin’ireo ny famonjena; Ary aoka hitsimoka miaraka amin’izay ny fahamarinana. Izaho Jehovah no efa nahatonga izany. » (Isaia 45:8)
« Fa ny Isiraely kosa ho voavonjin’i Jehovah Amin’ny famonjena mandrakizay; tsy ho menatra na hangaihay mandrakizay mandrakizay ianareo. » (Isaia 45:17)
« Hampanatoniko ny fahamarinako, ka tsy ho lavitra intsony; ary ny famonjeko tsy hitaredretra; fa hametraka famonjena ao Ziona Aho sy ny voninahitro ho an’ny Isiraely. » (Isaia 46:13)
« Izao no lazain’i Jehovah: Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako Anao. Ary tamin’ny andro famonjena no namonjeko Anao; Dia hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an’ny olona, mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava » (Isaia 49:8)
« [Ny fiposahan’ny famonjena, sy ny fanesorana ny kapoaky ny fahatezeran’i Jehovah] Mihanoa Ahy, ianareo izay miezaka mitady fahamarinana, dia izay mitady an’i Jehovah: Tsarovy* ny vatolampy izay nakana anareo sy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo. [Heb. Jereo] » (Isaia 51:1)
« Andrandrao ho amin’ny lanitra ny masonareo, ary jereo ny tany ambany; fa ny lanitra ho levona tahaka ny setroka, ary tany ho tahaky ny lamba mangarahara, ary ny mponina ao dia ho faty tampoka*; fa ny famonjena kosa haharitra mandrakizay, ary ny fahamarinako tsy mba ho rava.[Na: tahaka ny fahafatin’ny moka] » (Isaia 51:6)
« Fa ny kalalao hihinana azy tahaka ny fihinan-damba, ary lolo fotsy hihinana azy tahaka ny fihinam-bolon’ondry; fa ny fahamarinako haharitra mandrakizay, ary famonjena hihatra amin’ny taranaka fara-mandimby. » (Isaia 51:8)
« Akory ny hatsaran’ny tongotr’iry mitondra teny soa mahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana! Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena, eny, izay manao amin’i Ziona hoe: Mpanjaka Andriamanitrao! » (Isaia 52:7)
« Jehovah efa nampiseho* ny sandriny masina teo imason’ny firenena rehetra; ary ny faran’ny tany rehetra hahita ny famonjen’Andriamanitsika. [Heb. nampitanjaka] » (Isaia 52:10)
« Isika rehetra mampierona tahaka ny bera ary mitoloko tokoa tahaka ny voromailala; miandry ny rariny isika, nefa tsy misy, ary ny famonjena, nefa lavitra antsika izany. » (Isaia 59:11)
« Eny, hitany fa tsy nisy olona, sady talanjona Izy, satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany no nanao famonjena ho Azy, ary ny fahamarinany no nanohana Azy. » (Isaia 59:16)
« Niakanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovan-tratra Izy, ary fiarovan-doha famonjena no teo amin’ny lohany; ary niakanjo ny akanjo famaliana Izy eny, nandray ny fahasaro-piaro ho akanjo ivelany Izy. » (Isaia 59:17)
« Ny fampahoriana tsy ho re eo amin’ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin’ny fari-taninao; ny mandanao dia hataonao hoe Famonjena, ary ny vavahadinao hataonao hoe Fiderana. » (Isaia 60:18)
« Hifaly dia hifaly amin’i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin’Andriamanitro; fa notafiany fitafiana famonjena aho, ary nakanjoiny akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka hamama tahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firàvany. » (Isaia 61:10)
« [Ny handrosoan’ny voninahitr’i Jerosalema] Tsy hangina Aho noho ny amin’i Ziona, Ary tsy hitsaha-miteny Aho noho ny amin’i Jerosalema, mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. » (Isaia 62:1)
« Indro, Jehovah efa nanambara hatrany amin’ny faran’izao tontolo izao nanao hoe: Lazao amin’i Ziona zanakavavy: Indro, avy ny famonjena anao; Indro; ny valim-pitia hatolony dia ao aminy, ary ny valin’asa homeny dia eo anoloany. » (Isaia 62:11)
« Nitsinjo Aho, nefa tsy nisy hamonjy, ary talaniona Aho, satria tsy nisy hanohana, ka dia ny sandriko ihany no nanao famonjena ho Ahy, ary ny fahavinirako no nanohana Ahy. » (Isaia 63:5)
« [Fivavahana sy fiaiken-keloka ary fiderana noho ny famonjen’Andriamanitra hatramin’ny taloha] Ny famindram-pon’i Jehovah no hambarako, dia ny fiderana an’i Jehovah araka izay rehetra nataony tamintsika sy ny haben’ny fahasoavana tamin’ny taranak’Isiraely. Izay nomeny azy araka ny fiantrany sy araka ny haben’ny famindram-pony. » (Isaia 63:7)
« Foana tokoa ny horakoraka any amin’ny tendrombohitra sy ny havoana*; Marina fa ao amin’i Jehovah Andriamanitray ny famonjena ny Isiraely.[Na: Foana tokoa ny fihorakorahana any amin’ny havoana] » (Jeremia 3:23)
« [Ny amin’ny fahatokiana olona sy ny fahatokiana an’Andriamanitra, ary ny vavaka nataon’i Jeremia nangatahany famonjena] Izao no lazain’i Jehovah: ho voaozona izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin’i Jehovah ny fony. » (Jeremia 17:5)
« [Ny fifampiankinan’ny famonjena ny Isiraely sy ny fahamasinany] Ary tonga tamiko ny tenin’i Jehovah nanao hoe: » (Ezekiela 36:16)
« Ary rehefa lavo izy, dia hahazo famonjena kely; ary maro no hikambana aminy amin’ny fihatsaram-belatsihy. » (Daniela 11:34)
« Izao no maharingana anao, ry Isiraely ô; Manohitra Ahy Izay famonjena anao ianao. » (Hosea 13:9)
« Fa izaho, dia feo midera no entiko mamono zavatra hatao fanatitra ho Anao, Ary izay nivoadiako dia hefaiko; An’i Jehovah ny famonjena. » (Jona 2:10)
« Fa izaho kosa dia hanandrandra an’i Jehovah, Eny, hiandry an’Andriamanitry ny famonjena ahy aho; Andriamanitro no hihaino ahy. » (Mika 7:7)
« Nefa izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany Sy hiravoravo amin’Andriamanitry ny famonjena ahy. » (Habakoka 3:18)
« Dia famonjena antsika amin’ny fahavalontsika, sy amin’ny tànan’izay rehetra mankahala antsika; » (Lioka 1:71)
« Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao, » (Lioka 2:30)
« Ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen’Andriamanitra (Isa. 40:3-5). » (Lioka 3:6)
« Ary hoy Jesosy taminy: Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’i Abrahama koa. » (Lioka 19:9)
« Hianareo mivavaka amin’izay tsy fantatrareo; izahay kosa mivavaka amin’izay fantatray, satria avy amin’ny Jiosy ny famonjena. » (Jaona 4:22)
« Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena. » (Asan’ny Apostoly 4:12)
« Ry rahalahy, taranak’i Abrahama, sy izay rehetra eo aminareo matahotra an’Andriamanitra, dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin’izao famonjena izao. » (Asan’ny Apostoly 13:26)
« fa izao no nandidian’ny Tompo anay: Efa nanendry Anao ho fahazavan’ny jentilisa Aho, Mba ho famonjena hatrany amin’ny faran’ny tany Hianao (Isa. 49. 6). » (Asan’ny Apostoly 13:47)
« Koa aoka ho fantatrareo fa izao famonjen’Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin’ny jentilisa, ary izy hihaino azy. » (Asan’ny Apostoly 28:28)
« Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin’ny Jiosy aloha, dia vao amin’ny jentilisa* koa. [* Gr. Grika] » (Romana 1:16)
« Ry rahalahy, ny irin’ny foko sy ny angatahiko amin’Andriamanitra ho an’ireny dia famonjena. » (Romana 10:1)
« Fa amin’ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin’ny vava no anekena hahazoana famonjena. » (Romana 10:10)
« Dia hoy izaho: Sao dia tafintohina ho lavo anie ny Isiraely? Sanatria izany! fa ny fahatafintohinany no nahatonga famonjena ho an’ny jentilisa mba hampialona azy. » (Romana 11:11)
« Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin’ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika. » (Romana 13:11)
« Ary raha ampahorina izahay, dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany; ary raha ampiononina izahay, dia ho fampiononana anareo izany, ka miasa amin’ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin’izay entinay. » (2 Korintiana 1:6)
« fa hoy Izy: Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako anao, Ary tamin’ny andro famonjena no namonjeko anao (Isa. 49. 8); indro, ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena; » (2 Korintiana 6:2)
« Fa ny alahelo araka an’Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana; fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon’izao tontolo izao. » (2 Korintiana 7:10)
« [Ny famonjena sy ny fahafahan’ny mino an’i Kristy ampitahaina amin’ny fahamelohana sy ny fahandevozan’izay miankina amin’ny lalàna] Ry Galatiana adala, iza no nanimba* anareo; kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana marimarina an’i Jesosy Kristy voahombo tamin’ny hazo fijaliana? [* Gr. mamosavy] » (Galatiana 3:1)
« Ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin’ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo,- eny, ao aminy koa ianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin’ny Fanahy Masina araka ny teny fikasana. » (Efesiana 1:13)
« [Fivavahana ho an’ny Kristiana tao Efesosy mba handrosoany hahalala ny hatsaran’ny famonjena, sy fampahatsiarovana azy ny halehiben’ny fitiavan’Andriamanitra] Ary noho izany izaho koa, rehefa nandre ny finoanareo an’i Jesosy Tompo izay hitan*’ny olona masina rehetra, [* Na: (ny finoanareo an’i Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo)] » (Efesiana 1:15)
« Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy; » (Efesiana 6:17)
« Fa fantatro fa ho tonga famonjena ahy izany noho ny fangatahanareo sy ny fanomezana* ny Fanahin’i Jesosy Kristy, [* Na: fanomezan’] » (Filipiana 1:19)
« ka tsy ho azon’ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin’inona na amin’inona; fa amin’ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjena anareo kosa, sady avy amin’Andriamanitra. » (Filipiana 1:28)
« Koa amin’izany, ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasà amin’ny tahotra ny ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. » (Filipiana 2:12)
« Fa satria an’ny andro isika, dia aoka hahonon-tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. » (1 Tesaloniana 5:8)
« Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin’ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika, » (1 Tesaloniana 5:9)
« [Fananarana sy fanaovam-beloma] Fa izahay tsy maintsy misaotra an’Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malalan’ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin’ny voalohany hahazo famonjena amin’ny fanamasinan’ny Fanahy sy ny finoana ny marina, » (2 Tesaloniana 2:13)
« Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin’ny olom-boafidy, mba hahazoan’ireny koa famonjena. dia izay ao amin’i Kristy Jesosy. mbamin’ny voninahitra mandrakizay. » (2 Timoty 2:10)
« fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay mampahahendry anao ho amin’ny famonjena amin’ny finoana izay ao amin’i Kristy Jesosy. » (2 Timoty 3:15)
« Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra, » (Titosy 2:11)
« Tsy fanahy manompo* va izy rehetra, nirahina hanao fanompoana ho an’izay handova famonjena? [*Na: manao fanompoam-pivavahana] » (Hebreo 1:14)
« hataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? dia ilay nampilazaina ny Tompo tamin’ny voalohany, ary nohamafin’izay nandre tamintsika kosa, » (Hebreo 2:3)
« Fa miendrika Izay anton’ny nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra, raha mitondra zanaka maro ho any amin’ny voninahitra, ny hahatanteraka ny Tompon’ny famonjena ireo amin’ny fahoriana. » (Hebreo 2:10)
« Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory*. [* Gr. tandrifin’izany] » (Hebreo 4:16)
« ary rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga loharanon’ny famonjena mandrakizay ho an’izay rehetra manaraka Azy, » (Hebreo 5:9)
« Nefa, ry malala, na dia miteny izany aza izahay, dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. » (Hebreo 6:9)
« dia tahaka izany koa Kristy, rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otan’ny maro, dia hiseho fanindroany, tsy amin’ota, amin’izay miandry Azy, ho famonjena. » (Hebreo 9:28)
« Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’ny fahaverezana, fa naman’izay mino ho amin’ny famonjena ny fanahy. » (Hebreo 10:39)
« izay arovan’ny herin’Andriamanitra amin’ny finoana ho amin’ny famonjena efa vonona haseho any am-parany. » (1 Petera 1:5)
« mandray ny anton’ny finoanareo, dia ny famonjena ny fanahy. » (1 Petera 1:9)
« Ny amin’izany famonjena izany dia notadiavin’ny mpaminany sy nokatsahiny fatratra, dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo; » (1 Petera 1:10)
« fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniria ny rononom-panahy tsy misy fitaka, mba hitomboanareo amin’izany ho amin’ny famonjena, » (1 Petera 2:2)
« Ary ny fahari-pon’ny Tompontsika dia ekeo ho famonjena, tahaka ny voasoratr’i Paoly, rahalahy malalantsika, taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, » (2 Petera 3:15)
« Ry malala, raha manao izay zotom-po rehetra hanoratra aminareo aho hilaza ny amin’ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, hananatra mba hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an’ny olona masina. » (Joda 3)
« dia niantso tamin’ny feo mahery izy nanao hoe: Ny famonjena anie ho an’Andriamanitsika, Izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy ho an’ny Zanak’ondry. » (Apokalypsy 7:10)
« Dia nahare feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe: Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan’Andriamanitsika, Ary ny fahefan’ny Kristiny, Satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay miampanga azy eo anatrehan’Andriamanitsika andro aman’alina. » (Apokalypsy 12:10)
« [Saotra ataon’ny any an-danitra noho ny nitsarana an’i Babylona] Rehefa afaka izany, dia nahare hoatra ny feon’ny vahoaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe: Haleloia! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an’Andriamanitsika; » (Apokalypsy 19:1)